Fa maninona ny raharaham-barotra eCommerce rehetra no mila fitaovana fanaovana vidiny mavitrika? | Martech Zone
Talata, Martsa 10, 2020 Talata, Martsa 10, 2020 Ángela de la Vieja
Fantatsika rehetra fa miankina amin'ny lafin-javatra isan-karazany ny fahombiazana amin'ity vanim-potoana vaovao amin'ny varotra niomerika ity, ka tena ilaina ny fampiharana ireo fitaovana mety.
Ny vidiny dia mitohy hatrany ho anton-javatra famonoana rehefa manapa-kevitra momba ny fividianana. Iray amin'ireo fanamby goavana atrehin'ireo orinasa eCommerce amin'izao fotoana izao ny fampifanarahana ny vidiny mba hifanaraka amin'izay tadiavin'ny mpanjifany amin'ny fotoana rehetra. Izany dia mahatonga ny fitaovana vidiana mavitrika ho an'ny fivarotana an-tserasera.
Paikady momba ny vidiny mavitrika, ankoatry ny fomba mahomby hitazomana ny fisian'ny fifaninanana eo amin'ny tsena, dia manampy anay hiteraka fahalianan'ny mpanjifa. Izany no antony maha-zava-dehibe azy ankehitriny ho an'ny orinasam-barotra eCommerce ny fananana fitaovana fampidinana vidiny mavitrika hamolavolana ny paikadim-bidiny mirary.
Ireo goavam-be amin'ny varotra an-tserasera dia efa mampiasa ity karazana teknolojia ity. Azonao atao ny mahita an'io amin'ny Amazon, izay afaka manova ny vidin'ny vokariny an-jatony isan'andro. Ny algorithm izay ampiasain'i Amazon dia mijanona ho mistery amin'ireo mpivarotra izay miezaka manaraka ny firon'ity goavambe internet ity.
Misy fiatraikany amin'ny vokatra teknolojia ny fiovan'ny vidin'i Amazon. Noho ny ady vidim-piainana tsy miova, ity sehatra ity dia iray amin'ireo azo ovaina indrindra. Na izany aza, ny fiovan'ny vidin-javatra dia miseho amin'ny karazana vokatra atolotry ny Amazon.
Inona avy ireo tombony azo amin'ny fananana paikady momba ny vidiny miroborobo?
Io dia ahafahanao mifehy ny tombom-barotra isaky ny vokatra amin'ny fotoana rehetra hitazomana ny fifaninanana eo amin'ny tsena.
Mamela anao hanararaotra ny fotoana mety amin'ny tsena. Raha lany tahiry ny fifaninanana dia avo ny tinady ary ambany ny tolotra. Midika izany fa afaka mametraka vidiny ambony ianao, izay hampiakatra ny tombom-barotrao.
Manampy anao hijanona ho mpifaninana izany ary hifaninana amin'ny teny mitovy. Ohatra iray mazava dia i Amazon, izay, hatramin'ny voalohany, dia naka ny paikadiny momba ny vidiny mirary hatramin'ny max, izay fanalahidy tsy azo lavina amin'ny fahombiazany. Ankehitriny ianao dia afaka manara-maso ny vidin'ny Amazon ary mamaritra izay ho teti-bidinao.
Io dia ahafahanao manao polisy amin'ny vidiny, manalavitra ny fanolorana vokatra lafo vidy eny an-tsena, izay afaka manome sary diso an'ireo mpanjifanao momba ny politikanao momba ny vidiny, ary manakana azy ireo tsy hoheverina ho lafo loatra na lafo vidy loatra.
Inona no karazana teknolojia mamela antsika hampihatra an'io paikady io?
Ny paikadim-bidy mavitrika dia mila fitaovana hanatanterahana azy ireo, rindrambaiko manokana amin'ny fanangonana angona, fanodinana azy ary fanatanterahana hetsika ho setrin'ny fiovana rehetra tafiditra ao amin'ny algorithm.
Ny fananana rindrambaiko apetraka amin'ny fanatanterahana sy fanaovana automatique asa, toy ny fandalinana ny fitondran-tenan'ny mpanjifa sy ny vidin'ny orinasa hafa ao amin'ity sehatra ity dia ahafahana manafaingana ny fizotry ny fanapaha-kevitra ary miaraka amin'izany, hahazoana tombony bebe kokoa.
Ireo fitaovana ireo dia miankina amin'ny angon-drakitra lehibe hamakafaka ireo fiovaovana marobe izay afaka mametraka ny varotra amin'ny fotoana tena izy. Toy ny fitaovana fampidinana vidiny mavitrika avy Minderest, izay ahafahanao mamaritra izay vidiny tsara indrindra ho an'ny vokatrao sy ny serivisinao amin'ny fotoana rehetra amin'ny alàlan'ny famakafakana mihoatra ny 20 KPI miaraka amina maodely mahery vaika momba ny artifisialy (AI). Ny mpivarotra tsirairay dia mahazo ny fampahalalana ilainy amin'ny fifaninanana sy ny tsena. Ity AI koa dia manana fahaiza-mianatra amin'ny milina, ahafahana mandray ny fanapahan-kevitra noraisina taloha. Amin'izany fomba izany, ny paikady momba ny vidiny dia hodiovina tsikelikely ary hitarika any amin'ny fitomboan'ny orinasa.
Ny mandeha ho azy no fanalahidy
Ny vidiny mavitrika dia teknika iray manomboka automation process. Na dia fanazaran-tena azo tanterahina amin'ny tanana aza io, ny fahasarotana sy ny sakan'ny anton-javatra voakasik'izany dia mahatonga azy tsy ho vita. Alao sary an-tsaina vetivety ny dikan'ny hoe avereno jerena tsirairay ny vokatra ao amin'ny katalaogin'ny mpifaninana aminao tsirairay mba hitrandrahana ireo fironana hitantana ny vidin'ny fivarotana anao. Tsy manintona mihitsy.
Amin'ny fotoana fampiharana ny paikadim-bidy mavitrika no manomboka ny teknolojia mandeha ho azy, mahatonga ny zavatra rehetra azo atao. Izy io dia manatanteraka ireo hetsika nofaritan'ny paikady mifototra amin'ireo miovaova nomena sy navoaka. Araka izany, isaky ny tranga dia misy valiny omena.
Ny zava-misy fa ny fampiharana ny vidiny mavitrika dia, raha fintinina, ny hetsika mandeha ho azy dia midika fa misy be dia be tahiry amin'ny vidin'ny olombelona sy ny fotoana. Io dia ahafahan'ny mpitantana sy mpandalina eCommerce hifantoka amin'ny lahasa avo kokoa, toy ny fandalinana data, hanatsoaka fehin-kevitra ary handray fanapahan-kevitra tsara indrindra ho an'ny orinasa.
Ángela dia manam-pahaizana amin'ny famakafakana orinasa, vidiny ary fitantanana haino aman-jery, mitarika votoaty manerana ny fantsona rehetra ary koa fitantanana ny fisian'ireo sehatra sosialy rehetra.